Toyota Corolla Fielder 2010 (#691100) ကို Pyinoolwin ၿမိဳ... | CarsDB
Lot Number: #691100
Fielder၂၀၁၀ ​မော်​ဒယ်​ X 202 ​
## 1500 CC.2wd ​၊ Super Black Color
## Key Remote, Digital AC,
## ​Original ထိုင်​ခုံ leather seat
## Original Alloy တာယာ ၄ လုံး အသစ်​
## အင်​ဂျင်​​အောက်​ပိုင်​း အဆွဲအရုန်​းရှယ်​​။
## ​ရှေ့မီးကြီး ကြောင်မျက်လုံး။ HID မီးအ​ဖွေး​
## ​Original နောက်မီးခွက်အဖြူ ။ ​နောက်​ထိုင်​ခုံ ဆွဲလှဲ၊ ​နောက်​ခန်​းမီး။
## Original Kilo. Cancellation Grade4စစ်စစ်
## ​ဈေး ၂၈၅ သိန်​း ပါးပါး ညှိပါဗျာ။
CarsDB တွင် ( ဦး/ဒေါ် ) Myo Thet မှ ကြော်ငြာတင်ထားသော Toyota Corolla Fielder 2010 နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းလိုသည်ဟု ပြောပါရန်။